Taliyihii nabadsugida Puntland ee gobolka Mudug oo lagu dilay Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliyihii nabadsugida Puntland ee gobolka Mudug oo lagu dilay Gaalkacyo
Taliyihii nabadsugida Puntland ee gobolka Mudug oo lagu dilay Gaalkacyo
November 18, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Taliyaha la dilay Xaashi Aadan Cali. [Sawir Hore]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Taliyihii nabadsugida Puntland ee gobolka Mudug Xaashi Aadan Cali ayaa fiidnimadii caawa oo Isniin ah lagu dilay magaalada Gaalkacyo, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka.
Niman hubeysan ayaa toogtay taliyaha kadibna ka baxsaday goobta, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
Taliyaha la dilay ayaa waxaa magacaabay madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali bishii Agoosto sanadkii 2016.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada dilkaas, sida ay qoreen warbaahinta afkooda ku hadasha.
Xubno ka socda guddiga doorashooyinka Puntland oo Nairobi kulan kula yeeshay masuuliyiin katirsan beesha caalamka
Wasiirada Puntland oo ansixiyay miisaaniyada dowladda ee sanadka 2020 oo lagu qiyaasay $346 milyan
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa taliyeyaal cusub u magacaabay ciidamada milatariga iyo booliiska maanta oo Axad ah. Taliyaha cusub ee milatariga ayaa loo magacaabay Cabdishakuur Cabdullaai Xuseen, sida lagu sheegay digreeto kasoo [...]
Somalia’s oil ministry has moved a step closer to alleviating more than two decades of oil-sector paralysis. The country’s new petroleum Revenue Sharing Agreement, or RSA, relates to Somalia’s petroleum law, which was approved last [...]